Zanu-PF Yoburitsirana Makano kuMasvingo
Ndira 06, 2010
vamwe vakuru muExecutive yemasvingo vanonzi vakaoenda kunaAmai Joice Mujuru vachiti vaMzembi vadzingwe basa.
Vamwe vakuru muhutungamiri hweZanu-PF kuMasvingo vanonzi vakaenda kumutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, vachiti vari kuda kuti gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, VaWalter Mzembi, vadzingwe basa.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti Amai Mujuru vakati havana simba rekuita izvi. Mudunhu reMasvingo mapindwa napongwe sezvo chimwe chikwata cheZanu-PF chinosanganisira vamwe vakarwa hondo yerunsununguko, gurukota redzidzo yepamusoro, VaStan Mudenge, pamwe naAmai Shuvai Mahofa, vari kunzi vanoda kuti VaMzembi vabviswe pachigaro chekuva gurukota.
VaMzembi vari kunzi vanonyanya kudyidzana nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, uye vakatsigira Amai Mujuru kuva mutevedzeri wemutungamiri weZanu-PF, kwete Muzvare Oppah Muchinguri, avo vakanga vadomwa nedunhu reMasvingo.
Sachigaro weZanu-PF muMasvingo, VaLovemore Matuke, vanoti kunetsana kuripo asi varamba nyaya yekuti pane vakaenda kuna Amai Mujuru.
Asi nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Muzvinafundo John Makumbe, vanoti zviri kuitika kuMasvingo zvinhu zviri kuitika mumatunhu ose eZanu PF.
VaMakumbe vatiwo vanhu vemuZanu PF havakwanisi kubvisa VaMzembi nekuti chinzvimbo chavainacho, vakachipihwa naVaMugabe, kwete nehutungamiri hweZanu PF kuMasvingo.
Hurukuro naVaJohn Matuke